Bots Attack. Nzira Yokubvisa Nayo Kubva Kwenzvimbo Yako - Semalt Practice
Kana iwe uri kutambura nemavirusi kana kushungurudza, unofanirwa kunge uri bhodhi, uye iwe unofanira kuzvibvisa nokukurumidza. Bots inofadza software inogona nyore nyore kuvhara makombiyuta ako, mashizha, uye mafoni ehurumende zvakanyanya. Zvinoshandiswa nevekusemesa kuparadzira spam, kuparadzira kushungurudzwa kwebasa uye kutungamirira zvakasiyana-siyana zvemhosva pamutambo - altalena da giardino bimbi. Parizvino, ndezvechokwadi kutaura kuti bots inobhadharwa kudarika mavhesi, rootkits, uye malware. Izvi, zvisinei, zviri kuchinja uye vatsvakurudzi vanotaura kuti bots ndeyvenjodzi sevirusi uye kakombiyuta malware. Zvinogona kuparadza webhusaiti yako uye kuwana ruzivo rwemaseri ako, kuparadza zita rako renzvimbo paIndaneti. Munyaya iyi, Julia Vashneva, Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi vanobudirira, achakuratidza kuti chii chaunofanira kuita kana mabhoti akakunda nzvimbo yako.
Chenjererai mavharusi uye bots
Zvakakosha kuti uchenjere mavirusi uye bots. Vamwe vavo vanogona kuuraya maPuratifomu eWebbots, Sabots, Agobots, Wootbots uye Mobots. Mhando shomanana inogona kuchinja yako Trojan software uye inogona kuiswa mu computer yako maitiro. Zvinouyisa matambudziko mazhinji, kupa nzira dzevapambi vemhosva kuti vashandise dheedhi yako uye vauye ruzivo rwako pachako. Kana uine huwandu hwebhoti mufoni yako, vanopikisa vangangotora kutungamirirwa kwehurongwa hwako, uye zvingasave zvingaita kuti iwe udzimise nezvose..
Kungofanana nemhando dzakasiyana dzemavirusi uye malware, mabhizimusi haasi nyore kuona uye anogona kukonzera matambudziko mazhinji kune imwe yako. Kana uchida kuvabvisa kubva kumakombiyuta, unogona kutevera matanho mana akareba:
Kushandisa Windows Task Manager
Unofanira kufungidzira kushandisa Windows manager maneja kana uri kutsvaga chidimbu chezvikwereti. Kana iwe usina nzvimbo yakakwana yekuwana zviyero izvi, unokumbirwa kuti urege kuzvitsvaga kubva kune zvisizvo zvisingazivikanwi sezvo hackers inogona kukuvadza kombiyuta yako nenzira iyoyo.
Kuongorora nzira yako
Chipiri uye chimwe chezviito zvinonyanya kukosha kuongorora kakombiyuta yako. Iwe unofanirwa kuzviita kuti uone kuti chigadziro chako chinoramba chisina mavharusi, malware, uye bots. Kurwisa midziyo yakawanda ye-antivirus haisi kukosha. Pane kudaro, unofanirwa kushandisa purogiramu imwe chete ine simba uye kubvisa magwaro nematombo akakodzera.
Kuongorora mabhuku akazaruka
Unofanirwa kuongorora kutadza uye nzvimbo dzekuzarura kuti ugare wakachengeteka mukati. Zvimwe zvemasimba ane simba ekutsvaga ndeyeNessus uye QualysGuard, iyo inokubatsira kuti uone mahwendefa ako akazaruka uye akapfigwa. Uyezve, iwe unofanira kuongorora system yako yehutachiona hwemhando dzose dzehutachiona uye unomhanya unoramba uchichengeteka scan nguva dzose.
Danho rekupedzisira uye rokupedzisira nderokuongorora zvirwere. Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nekucherechedza hutsika hwemotokari inobata chigadzirwa chako. Iwe unofanirwa kuisa software yakakodzera chete, uye edza kuva neruzivo rweDashboard yako yeDashboard kuti uone kana watanga kugamuchira maitiro akanaka kana kwete.
Iyi ndiyo dzimwe nzira dzinofadza uye dzinoshamisa dzaunogona kunamatira kuti ubvise mabhodhi uye zvirwere zvehutachiona.